The Gianteway Causeway, fahagagana voajanahary any Irlandy | Vaovao momba ny dia
The Gianteway Causeway, fahagagana voajanahary any Irlandy
Nilaza izahay andro vitsivitsy lasa izay Irlandy manana firenena mahafinaritra ary androany dia manana karatra karatra mpizahatany iray hafa mahasarika mpitsidika isika: ny Làlan-dehibe Giants. Saingy amin'ity indray mitoraka ity dia tsy any amin'ny Repoblikan'i Irlandy fa any Irlandy Avaratra, ny ampahan'ny nosy mbola fehezin'ny UK.
Ny morontsirak'i Irlandy dia manohy manome nofy antsika amin'ny vatolampy sy ny rano ary izany no Giant's Causeway na ny Làlan'ny Giant's, toy izany ny anarany amin'ny anglisy. Toerana tena mora ampiasaina izy io ary raha mikasa ny hankany amin'ny Emerald Isle ianao dia tsy afaka mitsahatra ny mahafantatra azy.
1 Làlan'ny goavambe
2 Ahoana ny fomba handehanana any amin'ny Causeway Giant
3 Tsidiho ny Causeway an'ny Giant
Any amin'ny ankehitriny no misy azy county antrim ary raha ny filazan'ny geolojika dia niforona teo anelanelan'ny 50 sy 60 tapitrisa taona lasa izay nandritra ny Paleocene Period. Tamin'izany fotoana izany dia nisy ny hetsika volkano ary eto no niandohan'ireo vatolampy: ny ranon-tsavony avy amin'ny basalt anidina dia nidina tamin'ny tany malemy, fotsy, toy ny tsaoka, ary namorona velarana lava. Ny lava dia nangatsiaka sy nifanarahana ary vaky tamin'ny fomba mitovy amin'ny rehefa maina ny fotaka sy vaky.
Izany no nahaterahana izany endrika manokana an'ny andry marindrano misy tendrony miondrika etsy ambany ary mivaky eo amboniny tena mahasarika maso izany. Ny hatevin'ny andry dia toa misy ifandraisany amin'ny hafainganam-pandehan'ny hatsiaka. Tsara kokoa ny mahafantatra an'izany rehetra izany alohan'ny hijanonana na handehanana eo amboniny, amin'izay dia hoheverintsika bebe kokoa izy ireo.
Ahoana ny fomba handehanana any amin'ny Causeway Giant
Afaka mahazo ianao amin'ny fiara na amin'ny bus. Na ny Calzada na ny Visitor Center dia samy hita eny amin'ny lalana B147, ara-dalàna telo kilometatra miala ny tanànan'i Bushmills, 11 km miala an'i Coleraine ary 12 avy any Ballycastle. Misy toeram-piantsonana hahafahanao mandao ny fiaranao.
koa, eo anelanelan'ny Calzada sy Bushmills dia misy serivisy bus fa eo anelanelan'ny Martsa sy Oktobra dia miasa matetika ary 20 minitra fotsiny. Raha hisafidy ny Tren Tokony ho fantatrao fa azonao raisina any Belfast na Londonderry izany fa tsy maintsy mivoaka ao Coleraine ianao ary avy eo mifandray amin'ny bus (ny Ulsterbus Service 172). Raha ny anao no mandeha an-tongotra na bisikileta misy lalana tsara tokony hatao koa.
La Làlana amoron-tsiraka, ohatra, mivezivezy amoron-dranomasina mahafinaritra kilometatra maro.
Tsidiho ny Causeway an'ny Giant
Amin'izao fotoana izao ny vidiny dia £ 10 isaky ny olon-dehibe (vidiny an-tserasera). Ny vidiny mahazatra any dia £ 11 ka raha te hitahiry kely ianao tsara kokoa ny fiantsenana an-tserasera. Ny toerana dia misokatra amin'ny volana Janoary manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva, mifarana adiny iray sy sasany ny volana aprily, mey ary jona amin'ny 7 hariva, jolay ary aogositra amin'ny 9 hariva, mihidy indray ny septambra amin'ny 7 hariva, mifidy ny oktobra amin'ny 6 hariva ary novambra ary ny volana desambra dia mihidy amin'ny 5 ora hariva.
Ny tapakila dia miantoka ny fidirana amin'ny Centre Visitor, ny fampiasana ny torolàlana audio any ivelany ary ny bokikely orientation, fa ny bus eo anelanelan'ny Visitor Center sy ny Causeway mihitsy dia manana vidiny fanampiny. Na izany aza, misy fomba roa hanatonana mankamin'ny morontsiraka sy ny lalambeny goavambe: ny iray mivantana eo amin'ny làlana ary ny iray mandeha an-tongotra.
Avy amin'ny arabe, izay amelan'ny bisy anao, dia latsaky ny iray kilometatra ny halavanao ary raha tsy izany dia manana tongotra boribory manaraka ny lalan'ny hantsana mankany Dingana mpiandry ondry ary miverina amin'ny lalana izay manana halavirana 3 kilometatra.
Ny karatra paositra malaza indrindra, ilay rindrin'ny tsanganana izay toa fantsona taova iray, dia fantatra amin'ny anarana hoe Orinasa, tratran'ny làlana ambany kokoa izy ireo izay nalaina avy tamin'ny arabe ihany sy avy tamin'ny Shepherd's Steps. Amin'ity lalana ity dia ho hitanao ny mason'ny Giant, lavaka mena midorehitra, vita amin'ny vy amin'ny vatolampy. Tery ny lalana nefa telo kilometatra sy sasany ny halavany.
Eo ihany koa ny antso Runkerry Circuit, lalana iray manaraka ny làlana manaraka ny tampon'ny hantsam-bato, mandalo ny Hotely Causeway sy ny Runkerry House. Tsara ny fomba fijery, hitanao i Donegal ary na i Portrush aza, ary ny fihemorana miverina dia mampidina anao eo am-bavahady Visitor Center. Voalamina aloha ny làlana fa taty aoriana dia vita amin'ny ahitra na loto ary mandeha manodidina ny 4 kilometatra.
La Làlana Dunseverick Castle Ity dia iray amin'ireo mety ho fandehandehanana etsy. Raisinao amin'ny faran'ny fijanonana kely eo ambadiky ny toerana fijanonan'ny Visitor Center izany. Eto ny lalan'ny Causeway Coast dia manaraka làlambe tranainy iray izay nanomboka hatramin'ny 1949. Miampita tetezana vy ilay lalana ary miakatra ny havoana mankany Portballintrae mandritra ny roa kilometatra.
Ary farany dia misy ny Làlan-by tratra taloha Portallintrae amin'ny tenany ihany no iray amin'ireo làlana lava indrindra mankany an-tampon'ny hantsana. Tery sy malama izany, fa ny fomba fijery omena kosa dia mendrika jerena. Tonga ao amin'ny Dunseverick Castle izy ary avy eo mandatsaka anao eo am-pototry ny Visitor Center. Amin'ny fitambarany dia efa ho 13 kilometatra. Ireo dia ny diabe rehetra atolotry ny faritry ny morontsiraka an'ny Giant's Causeway.
Ny zava-dehibe, na inona na inona làlana fidinao hizorana, dia ny tsy hitsaharanao mahafantatra ny Fananganana vatosoa malaza indrindra: The Harp, The Organ, Camel's Hump ary Chimmey Stacks.
Ho azy ny Visitor Center no ivon'ny valan-javaboary: firafitry ny rindrina fitaratra sy ny tsanganana basalt, ny fanjifana mahomby sy ny endrika maoderina. Betsaka ny efitrano fampirantiana ao anatiny sy avy eo ambony tafo, rakotra ahitra, manana ianao Fijery 360º an'ny Causeway Giant.
Io no toerana handrenesanao ny zava-misy sy ny angano amin'ity lalana ity: ny zava-misy ara-jeolojika sy ny angano momba ireo goavambe roa: ny mahatsara ny Finn MacCool sy Benandonner, ny namanao ratsy avy any Skotland. Indray andro tsara dia nanapa-kevitra ny hanamboatra làlana iray hiampitana ny ranomasina izy ireo hihaona sy handrefy hery.
Nanao ny anjarany i Finn saingy mafy tokoa ka natory izy. Nahita azy ny vadiny saingy talohan'ny nahatafarany azy dia henony ny fahatongavan'i Benandonner ary hitany fa tena lehibe izy ka nafeniny tao ambadiky ny lamba sy satroka ny vadiny. Niantso azy ilay skoto fa ny vady, tena hendry, dia nangataka azy mba hampidina ny feony sao tsy hanaitra ilay zaza matory. Araka izany, nieritreritra i Benandonner fa raha lehibe ny zaza dia tsy maintsy goavambe tokoa ny rainy ... Inona no nataony? Fa niverina tany Ekosy izy ary nandrava ny lalana manarakaraka azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » The Gianteway Causeway, fahagagana voajanahary any Irlandy
Fitsidihana ny Tanàna Enchanted ao Cuenca
Ahoana ny fomba fandaminana manerana an'izao tontolo izao